January 2020 - MM Live News
တကယ်လို့ …. ထီပေါက်ခဲ့ရင် ထီရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ….ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့ …. ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့….. 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ် ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ပြောပြီး…. နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ် ထိုးရပါမယ်ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ…. ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကား ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီးရေးထားတယ်…. အာ့မှာ […]
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကို ဖတ်ထားပြီး လိုက်နာကြပါ အိန္ဒိယသမ္မတ ပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား´´တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်းတိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။ ဒီစာကို ဖတ် ပြီးသွားရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ တာဝန် သိစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယသမ္မတပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက လက်ရှိမြန်မာလူမျိုး အတော်များများရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ သဘောတူတယ် သဘောကျ တယ် နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လူတွေ သိအောင်ရှဲလ်ပေးစေချင်ပါတယ်။အခုလို ပြောထားတယ်။ ” မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်ရမလား..?ရတယ်ဆိုမှ […]
အမွနျလမျး တှငျ ကားတ ခုခုဖွဈနေ လြှငျ ဒီဖုနျးနံပတျတှကေိုဆကျပါ…
January 31, 2020 January 31, 2020 MM Live News
S AVE…SAVE..SAVE ” 09 420 8888 10 အမြန် လမ်းမကြီး ခရီးသွား ရင် ဒီဖုန်းနံပါတ် မဖြစ်မနေ လေး Save ထားပါ ။ ဘယ်လို အခက်အခဲ ဖြစ်ဖြစ် လာရောက် ကူညီပေး တဲ့ အမြန်လမ်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ ဖုန်း ပါ။ မနေ့ က (၁၀-၁၀-၂၀၁၉) မန္တလေး ဘက် မှ ရန်ကုန် ဘက်သို့ ကားမောင်း လာရင်း ၊ မိုင်တိုင် ၅၅ မိုင် ၁ ဖာလုံ မှာ စက်ထိုးရပ် သွား ပါတယ်။ဘာမှလည်း မလုပ်တတ်တော့ ဘူး ၊ စက်နှိုးလို့ လည်း မရတော့ လမ်းဘေးချရပ်ရင်း […]
လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမြားတှငျ ပြံ့နှံ့ နသေညျ့ တရုတျနံပါတျပွားတပျမျောတျောယာဉျမြားကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး မသိရှိသေးဘဲ စုံစမျးခိုငျးထားကွောငျး သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ပွောကွား
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ့ နေသည့် တရုတ်နံပါတ်ပြားတပ်မော်တော် ယာဉ်များကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မသိရှိသေးဘဲ စုံစမ်းခိုင်းထားကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား သည်။ “ ဓာတ်​ပုံ​တွေ​တွေ့တယ်​။​မေးထားတယ်​ ဘယ်​က​နေပြီး​တော့ ဝင်​လာလဲဆိုတာ။အဖြေ မရ​သေးဘူး။ စုံစမ်းတုန်းပဲရှိ​သေးတယ်” ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ တရုတ်နံပါတ်ပြားတပ်ဆင်ထား သည့် မော်တော်ယာဉ်များမှာ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ လည်းကောင်း၊ ဇန်နဝါ ရီ ၃၁ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့၌ လည်းကောင်း ဒေသခံများက တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းသို့ တွေ့ရှိမှုအား လူမှုကွန်ရက်စာ မျက်နှာများပေါ်သို့ တင်ခဲ့ပြီး မည်သူများ ဖြစ် သည်ကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ရှိခဲ့သည့် အဆိုပါ မော်တော်ယာဉ်များ နှင့် […]
ကနျြးမာရေးက တာဝနျရှိသူတှကေို သူပွောနကြေ စကားအတိုငျး တဈခှနျးတညျးပွောလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ လှငျမိုး…
သရုပ်ဆောင် လွင်မိုးက ကျန်းမာရေးက တာဝန်ရှိသူများကို သူပြောနေကျ စကားအတိုင်း တစ်ခွန်းတည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့၊ ယနေ့ မနက်ပိုင်းက China Southern လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ကျိုးပြည်နယ်က လိုက်ပါလာတဲ့ ဝူဟန်မြို့က တရုတ်အမျိုးသားမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတယ်လို့ သံသယရှိတာကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့နယ်ကနေစတင်လာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကူးစက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး နိုင်ငံတွင်းရောက်ရှိလာမှာကို အထူးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက်ဖလိုက်မှာ ပါဝင်လာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှိသူကြောင့် ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေ အထူးထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ လေယာဉ်ပေါ်ပါရှိတဲ့ ခရီးသည်တွေထဲမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကိုသာလျှင် ပြန်ခေါ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ခရီးသည်များအားလုံးကို ထိုလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒီလို အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြတဲ့ […]
မွဈကွီးနား မန်တလေး ၅၆ အစုံရထားပျေါတှငျ လူတဈဦးရုတျတရကျသဆေုံး…
မြစ်​ကြီးနား မန္တလေး ၅၆ အစုံရထားပေါ်တွင်​ လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံး 30.1.2020 ရက်​ ဇန်​နဝါရီလ ၃၀ ရက်​နေ့ည တွင်​ မြစ်​ကြီးနား မှ မန္တလေး အသွား အထူးအမြန်​ရထားပေါ်တွင်​ ပါလာသော လူတစ်​ဦးရုတ်​တရက်​သေဆုံ သွားပါသည်​ ။ သေဆုံးသွားသော Dead Body အား ည ၈နာရီ ကောလင်းဘူတာအရောက်​ တွင်​ ကောလင်းဆေးရုံသို့ သယ်​ဆောင်​သွားပါသည်​။ သေဆုံးသောသူမှာ ရုတ်​တရက်​သေဆုံးခြင်းဖြစ်​သည်​ဟု ရထားပေါ်ကာလာသူများကပြောပြကြပါတယ်။ ကောလင်းမှ မြို့နေပြည်​သူများသတိထားကြပါ။ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ MASK တပ်​ထားကြပါ။ မြို့နယ်​တာဝန်​ရှိသူများမှလဲ ကျိတ်​မဖြေရှင်းဘဲ အမြန်​ဆုံး ပြည်​ထောင်​စုကျန်းမာရေး အဆင့်​ ဝင်​ရောက်​စစ်​ဆေးကြည့်​နိုင်​ရန်​တင်​ပြသင့်​ပါတယ်​။Wai Moe‎ unicode မွဈကွီးနား မန်တလေး ၅၆ အစုံရထားပျေါတှငျ လူတဈဦးရုတျတရကျသဆေုံး 30.1.2020 ရကျ ဇနျနဝါရီလ […]
ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျသို့ ၁၀:၄၅ ခြိနျခနျ့တှငျဆငျးသကျလာသော တရုတျလကွေောငျးလိုငျးပျေါတှငျ ဝူစနျဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျခံထားရသူဟု သံသယရှိသူ လူနာတဈဦးအားအရေးပျေါအခွအေနအေရဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျ
Update News ရန်ကုန်သို့ဆင်းသက်လာသော တရုတ်လေကြောင်းလိုင်းပေါ်တွင် ဝူစန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ သံသယရှိသူ လူနာတစ်ဦးအားအရေးပေါ်အခြေအနေအရဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထား တရုတ်နိုင်ငံပိုင် Chaina Southern Airlines မှFlight အမှတ် CZ-3055 အဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်သည် တရုတ်ပြည် ကွမ်ကျုံး ( Guangzhou ) မြို့တော်မှ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မနက် ၁၀:၄၅ ချိန်ခန့်တွင်ဆင်းသက်လာစဉ် ….. တရုတ်လူမျိုးအသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် Mr. Wang Jinping သည် လေယာဉ်ပေါ်တွင် Coronavirus ပိုးကြောင့်သေဆုံးနေသလား သတိလစ်မေ့မျောနေသလားဆိုသည်ကို ခရီးသည်များက သံသယရှိခြင်းကြောင့် လေဆိပ်မှကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှ အရေးပေါ်ဆေးရုံကားဖြင့်ဝေဘာဂီဆေးရုံသို့သယ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရ ။ လေဆိပ်တာဝန်ရှိသူများကတော့ လူနာသည်အသက်မသေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည် ။ယနေ့ 10:40 အချိန်တွင် China Southern Airlines CZ-3055/B-6208/A-319ဖြင့် ကွမ်ကျိုးလေဆိပ်မှ […]
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး) ကြိုငျးတုံခရိုငျတှငျ မိနျးမနှငျ့သား သမီမြား စုစုပေါငျး(၅)လောငျးပွိုငျ လူသတျမှုဖွဈပှား
မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် ဟွေလုံကျေးရွာ၌ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီး (၅)လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွား ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံခရိုင် ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်ဟွေလုံကျေးရွာ၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် (၃:၀၀)နာရီအချိန် နေထိုင်သူ အမည် ကျကျိ အသက်(၂၇)နှစ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်ကာ …. ၎င်း၏ ဇနီး မနာစော အသက်(၃၆)နှစ် နှင့်(သား/သမီး)များဖြစ်သည့် မနားစောအသက်(၁၀)နှစ်၊ မောင်ကျဖေ့ အသက် (၇)နှစ်၊ မနားလတ် အသက်(၂)နှစ်၊ မနားလော(၆)လ စုစုပေါင်း(၅)ဦး အား ဓားဖြင့်ထိုးခုတ်ခဲ့ပြီး မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည် ထိုး/ခုတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဓားဖြင့် ထိုး/ခုတ်မှုကြောင့် ကျကျိ အပါဝင်(၅)ဦး (အမျိုးသား၂ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃ ဦး)တို့တွင် လည်ပင်းဝဲဘက်၊ဝဲရင်အုံ၊ ရင်ညွန့်၊ ယာနံဘေး၊ ဝမ်းဗိုက်၊ […]